I-Sports Wear, iJacket Yezokuphepha, amahembe, amahembe, i-Veded Vest - Neming
Isitifiketi se-BSCI, esisebenza ngokuklama nokukhiqiza ukugqoka okuhlukahlukene kwezemidlalo, ukugqoka umsebenzi wokugqoka, ukugqoka kwangaphandle okususelwa kusevisi ye-bespoke. Ukwenza izembatho zakho zihluke, singenza ukuphrinta kwesikrini okuhlukahlukene, ukufaka embossing, sublimation, ukuphrinta kokudlulisa ukushisa, ukufekethisa nokuningi. Izingubo zethu zekhwalithi ye-premium nempahla esebenzayo.
Asigcini ngokunikela ngezambatho zekhwalithi ye-premium, kepha futhi nokuhlinzeka ngamakhasimende ngokucophelela. Isiko lethu lebhizinisi ligxile ku: Ikhwalithi, Ukuthembeka, Insizakalo.
Sinezisebenzi ezinamakhono okuhlinzeka ngomsebenzi omuhle kakhulu.
Ifektri yethu iqinisekisiwe nge-BSCI, iCoca-cola Audited, isebenzisa uhlelo lokuphatha lwe-ISO9001. Indwangu iqinisekiswe yi-OEKO-TEX100, iBluesign, ihambisana neGlobal Recycled Standard 4.0.
Factory Usayizi Amamitha Square
Ufuna ukufunda kabanzi?
Sitholakala eNyakatho neChina, ngezindleko eziphansi zabasebenzi futhi siseduze neTianjin Port neBeijing Airport, okusenza sikwazi ukuthutha okulula kakhulu.
Zingaki izinhlobo zezingubo ezikhululekile ezikhona?
Izingubo zokungcebeleka ngokuvamile zingahlukaniswa zibe ezokuzilibazisa nge-avant-garde, ezokungcebeleka kwezemidlalo, ezokungcebeleka kwezothando, ezamabhizinisi nezokungcebeleka zasemakhaya. 1. I-Avant garde yokugqoka okwejwayelekile: Ukugqoka okwejwayelekile kwe-Avant-garde, okwaziwa nangokuthi imfashini ukugqoka okwejwayelekile, kungukuqhakanjiswa kwezithandwayo ...
Ungayikhetha kanjani indwangu yezingubo zangaphandle?
Kunezinhlobo eziningi zezindwangu zezingubo zangaphandle. Yikuphi okulungele kakhulu kuwe? Ekukhetheni izindwangu zangaphandle, kunemisebenzi eyisithupha ebalulekile. Ake sibheke izici eziyisithupha: Ukungena komoya Izinga lomoya ...